Iinkcenkcesho ezishushu ezishushu ezishushu zenziwe ngesinyithi abavelisi - China iiProfayili zensimbi ezishushu ezishushu ababoneleli kunye nefektri
Steel Angle Lintel Kuba Australia
Isefu yentsimbi ebunjiweyo yentsimbi yentsimbi eyakhiweyo, eyintsimbi yecandelo elinamacandelo alula, kwaye isetyenziselwa izinto zentsimbi kunye nesakhelo sezakhiwo zefektri, njl.Njl. Ngumtya wentsimbi onamacala amabini ojikelezayo omnye komnye. i-angled. I-lintel yentsimbi ye-galvanized ingahlulwa kwi-equilateral angle angle kunye ne-angle engalinganiyo yentsimbi.
Isefu yentsimbi yecala ebunjiweyo ine-weldability elungileyo, ukusebenza kwe-plastiki kunye namandla athile oomatshini.
Isinyithi U Isiteshi I-ASTM a36 Ye-Australia
Umjelo wentsimbi yintsimbi enamacandelo anqamlezileyo. Umjelo wentsimbi sisinyithi esakhiweyo sekhabhoni kulwakhiwo noomatshini, kwaye licandelo lesinyithi elinamacandelo anqamlezileyo. Ijelo lesinyithi lisetyenziswa ikakhulu kulwakhiwo, ikhethini yobunjineli bendonga, izixhobo zoomatshini kunye nokwenziwa kwezithuthi, njl.
Izinto eziluhlaza eziluhlaza zokuvelisa ijelo lesinyithi yintsimbi eboshwe ngekhabhoni okanye ibillet yentsimbi ephantsi enomxholo wekhabhoni ongagqithiyo kwi-0.25%. Ijelo lesinyithi eligqityiweyo lihanjiswa ngokusebenza kushushu, ukwenza okuqhelekileyo okanye ukuziqengqa okushushu.
I-Bar Flat Bar Q235B yoKwakha
Ibha yentsimbi ethe tyaba ibhekisa kwintsimbi enobubanzi obuyi-12-300mm, ubukhulu be-4-60mm, icandelo lomnqamlezo elixande kunye nomphetho omncinci.
Steel flat bar ukugqitywa imveliso sentsimbi, kwaye zingasetyenziswa njenge welding umbhobho engenanto kunye sheet engenanto ngenxa wokulaminetha kunye noqengqele sheet. Ukubalulwa kwayo kubonakaliswe ngeemilimitha zobubanzi * ububanzi, kunye nentsimbi ethe tyaba inokugqitywa ngentsimbi, isetyenziselwa izinto, ileli, iibhlorho kunye neengcingo, njl njl. Ibar yesinyithi ingasetyenziselwa ukungabinanto kwentsimbi eqinileyo kunye neslab ingqokelela kunye nokuqengqeleka kweepleyiti ezincinci.
Isinyithi H Beam Yokwakha
Isinyithi H umqadi luhlobo lwecandelo lezoqoqosho icandelo eliphezulu lokulunga kunye nolwabiwo oluphezulu lwendawo kunye nolwazelelelo ngakumbi ngokomlinganiso wamandla ukuya kubunzima, obizwa ngokuba icandelo lawo liyafana neleta yesiNgesi "H".
Ngenxa yokuba zonke iindawo zentsimbi H umqadi zicwangciswe kwiiengile ezilungileyo, intsimbi H umqadi inezibonelelo zokumelana okuqinileyo okuguqa, ukwakhiwa okulula, ukugcina iindleko kunye nobunzima besakhiwo sokukhanya kuzo zonke iindlela, kwaye isetyenziswe ngokubanzi.
Isinyithi i-Beam 36a Ubungakanani bokwakha
Isinyithi i-beam yintsimbi eqhekeziweyo enecandelo le-I elimile okwe-I. Isinyithi i miqadi yahlulwe ikakhulu yintsimbi yesiqhelo i-boram, ukukhanya kwesinyithi i-boram kunye ne-wide flange steel i beam. intsimbi i-beam eneentsimbi ezibanzi, ii-flanges eziphakathi kunye neeflanges ezimxinwa zahlulwe ngokobude beflanges kwiiwebhu.
I-Bar T yentsimbi AS 4680 ye-Australia
Isinyithi t bar luhlobo lwentsimbi oluphoswe kwimilo ye-T. Ifumana igama layo kuba icandelo layo lomnqamlezo liyafana neleta yesiNgesi "t". Zimbini iintlobo zentsimbi t bar:
I-1.steel t bar yahlulwe ngokuthe ngqo kwisinyithi esimilise u-H, esinemilinganiselo efanayo yokusetyenziswa kwentsimbi emise i-H (GB / T11263-2017) kwaye yinto efanelekileyo yokutshintsha i-welding ye-angle yentsimbi. Inezinto zokuxhathisa okuguqa ngamandla, ulwakhiwo olulula, ukonga iindleko kunye nobunzima besakhiwo.
2. Ibha yentsimbi eshushu ishushu, esetyenziswa ikakhulu koomatshini nasekugcwaliseni isinyithi sehardware.
Iibha zentsimbi zisetyenziselwa ukuxhasa izitena eziphindwe kabini kwiindawo apho uvulo olungezantsi lungayi kuzaliswa. Isiseko se-T-bar sivale indawo. Ngenxa yokusoloko sibhenceka kwimeko yendalo esingqongileyo, zonke ii-T-bar zethu zitshisiwe kushushu ukuze kungabikho miba irusi okanye umhlwa.
Uloliwe weSinyithi TR45 woLoliwe
Isiporo sensimbi yeyona nto iphambili kuloliwe. Umsebenzi wawo kukukhokela amavili esitokhwe ukuba siqhubele phambili, sithwale uxinzelelo olukhulu lweevili kwaye sikudlulisele kwabaleleyo. Umgaqo kaloliwe kufuneka ubonelele ngokuqhubekayo, ngokugudileyo kunye nokungaxhathisi kangako komphezulu wokuqengqeleka kwamavili. Kwindlela kaloliwe efakelwe umbane okanye kwicandelo lebhlokhi elizenzekelayo, uloliwe unokusetyenziselwa ukujikeleza umkhondo.